एक वर्षमा फुटबल टोलीका ५ कप्तान ! | Hamro Khelkud
एक वर्षमा फुटबल टोलीका ५ कप्तान !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – सामान्यतया एक फुटबल टोलीमा एक कप्तान हुने गर्छन् । कारणवश कप्तान उपलब्ध हुन नसक्दा उपकप्तानले उक्त भूमिका निर्वाह गर्छन् । कप्तान र उपकप्तान दुवै एकैपटक उपस्थित नहुने सम्भावना न्यून रहेपनि त्यसपछिका सिनियर खेलाडीले जिम्मेवारी सम्हाल्छन् । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले पछिल्लो एक वर्षमा सिनियर टोलीका लागि ५ फरक कप्तान पाएको छ ।
पछिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा नेपालले एएफसी एसियन कपको छनोटअन्तर्गत लिग चरणको फिलिपिन्सविरुद्ध खेलेको थियो । गोलरहित सकिएको उक्त खेल नेपालका तत्कालिन कप्तान अनिल गुरुङको लागि अन्तिम खेल थियो । अनिलले त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यास लिए । अनिलको संन्यासपछि टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी विराज महर्जनको पोल्टामा पर्यो ।
विराजले त्यसपछि यमनविरुद्ध भएको खेलमा नेपालको कप्तानी सम्हाले । बंगलादेशमा भएको साफ च्याम्पियनसिपअन्तर्गत दोस्रो खेलमा भुटानविरुद्ध नेपाली टोलीको कप्तान विराज महर्जन र उपकप्तान भरत खवास पहिलो रोजाईमा नपरेपछि किरण चेम्जोङले कप्तानी सम्हाले । त्यसपछिको खेलमा भरत खवास सुरुआती ११ मा आए र टोलीको नेतृत्व गरे ।
साफ सकिएको एक महिना नबित्दै बंगबन्धु कपमा नेपालले किरण र रोहित चन्दबिना टोली छनोट गर्यो । कप्तानमा थिए विराज महर्जन नै । पहिलो खेलमा विराजले टोलीको नेतृत्व गरेपनि दोस्रो खेलमा भने उनी खेल्न सकेनन् । भरत खवास पनि पहिलो रोजाईमा नपरेका कारण सिनियर खेलाडी निराजन खड्काले टोलीको कप्तानी सम्हाले । उनी परिवर्तन भएपछि टोलीको कप्तानी सुजल श्रेष्ठले गरेका थिए । तर सुरुआती रोजाईमा कप्तानी गरेका मात्र कप्तानका रुपमा गनिने प्रचलन रहेको छ ।
नेपालका कप्तान :
अनिल गुरुङ – फिलिपिन्सविरुद्ध खेलसम्म
विराज महर्जन – घोषित कप्तान
भरत खवास – माल्दिभ्सविरुद्ध
किरण चेम्जोङ – भुटानविरुद्ध
निराजन खड्का – प्यालेस्टाइनविरुद्ध